Hebbars kitchen APK အားဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဟင်းချက် Apps ကပ » Hebbars မီးဖိုချောင်
Hebbars မီးဖိုချောင် APK ကို
Hebbar ရဲ့မီးဖိုချောင် - အိန္ဒိယသက်သတ်လွတ်ချက်ပြုတ်နည်းများစုဆောင်းခြင်း app ကို။ အကျဉ်းစတုရန်းဗွီဒီယိုအတိုနှင့်အတူခြေလှမ်း-by-step ဓာတ်ပုံကိုချက်ပြုတ်နည်းများပူဇော်ဖို့ပထမဦးစွာအိန္ဒိယအစားအစာကိုစာရွက် app ကို။ ဤရွေ့ကားဗီဒီယိုများလှပတဲ့နောက်ခံရမှတ်နှင့်အတူသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမျက်နှာပြင်မှအညီ adapts ။
Hebbar ရဲ့မီးဖိုချောင် app ကိုအိန္ဒိယနှင့်၎င်းတို့၏အစားအစာများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ချက်ပြုတ်နည်းများ၏ကျယ်ပြန့ရှိပါတယ်။ သို့သော် Hebbar ရဲ့မီးဖိုချောင် app ကိုအိန္ဒိယ veg ချက်ပြုတ်နည်းများ့ကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ ဒါဟာအစအခြားနိုင်ငံတကာသက်သတ်လွတ်ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အခြားလူကြိုက်များကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအစားအစာပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်။ ထို့အပွငျ Hebbar ရဲ့မီးဖိုချောင်အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယတောင်ဘက်နံနက်စာနှင့်အခြားအိန္ဒိယမုန်အတွက်လက်ငင်းချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်အထူးပြုနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများလုပျရနျဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါရိုးရှင်းပါဝင်ပစ္စည်းများအတူရိုးရာနှင့် instant ချက်ပြုတ်နည်းများချက်ပြုတ်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
Hebbar ရဲ့မီးဖိုချောင် app ကို၏သော့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်; ဒါကြောင့်အဆင်းလှသောဗီဒီယိုအားနှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများ၏လတ်ကိုယ်စားပြုမှုပါရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Hebbar ရဲ့မီးဖိုချောင် app ကို၏အခြားထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်က contents တွေကိုနှင့် step-by-ခြေလှမ်းဓါတ်ပုံကိုစာရွက်နှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သျောလညျး, ဗီဒီယိုရဲ့အဘို့ကိုသင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခံရဖို့ရှိသည်သို့မဟုတ်သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ကနေ browse နိုင်သည် - http://hebbarskitchen.com/
Hebbar ရဲ့မီးဖိုချောင် app ရဲ့အင်္ဂါရပ်များ:
- posted တိုင်းအသစ်ကစာရွက်များအတွက်အသိပေးချက်များ။
- ရှာဖွေရေးဘား၏အကူအညီနှင့်အတူ, ရှာဖွေရေးသက်တမ်းသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် related စာရွက်စာရင်းမှတဆင့်ရှာဖွေ။
- ထိုချက်ပြုတ်နည်းများအများစုဟာအကျဉ်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာတင်ဆက်ဗီဒီယိုများနှင့် step-by-ခြေလှမ်းဓာတ်ပုံများနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။
- ညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်အသေးစိတ်ပါဝင်ပစ္စည်းများစာရင်းနှင့်ခြေလှမ်းနဲ့အတူစာရွက်နှင့် ပတ်သက်. အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ချက်ပြုတ်အတွေ့အကြုံကိုဖြေလျှော့ရန်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်ပေါ်ရှိမှတ်စုများအပိုင်းအားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
- သီချင်းစာရင်းကို browse နှင့်ရွေးဖို့ဗီဒီယိုများအတွက် Dedicated အပိုင်း။
- ချက်ပြုတ်နည်းများ Save သို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးထဲမှာသင်အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ Organize သို့မဟုတ် Bookmark ။
- မကြာသေးမီကပို့စ်များ, စာရွက်အမျိုးအစား, သင်တန်းများ, အစားအစာများနှင့်အပင်စာရွက်အချိန် & ရှုပ်ထွေးနေတဆင့်မီနူးမှတဆင့် Browse ။
- ခဏ, မက်ဆေ့ခ်ျ WhatsApp, အီးမေးလ်သို့မဟုတ်မည်သည့်လူမှုရေးကွန်ရက်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင်အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများမျှဝေပါ။
- သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုမျှဝေရန်နှင့် Hebbar ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲမှာ posted သည်အခြားမှတ်ချက်များစစ်ဆေး
ကျွန်ုပ်တို့၏မီးဖိုချောင် app ကိုချက်ပြုတ်နည်းများအမျိုးအစားအောက်ပါသို့ကွဲပြား,
- biryani ချက်ပြုတ်နည်းများ
- pulao ချက်ပြုတ်နည်းများ
- idli ချက်ပြုတ်နည်းများ
- dosa ချက်ပြုတ်နည်းများ
- Dal ချက်ပြုတ်နည်းများ
- roti, naan & paratha ချက်ပြုတ်နည်းများ
- sambar & rasam ချက်ပြုတ်နည်းများ
- သုပ် & raita ချက်ပြုတ်နည်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏မီးဖိုချောင် app ကိုအောက်ပါအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများရှိပါတယ်,
- Karnataka ချက်ပြုတ်နည်း
- Maharashtrian ချက်ပြုတ်နည်း
- Rajasthani ချက်ပြုတ်နည်း
- အိန္ဒိယ Street, စားနပ်ရိက္ခာချက်ပြုတ်နည်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများထွက်ကြိုးစားပါနှင့်သင်အတွင်းဝှက်ထားသောစားဖိုမှူးတွေ့ရှ။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူ Hebbar ရဲ့မီးဖိုချောင် app ကိုအပေါ် posted အဆိုပါချက်ပြုတ်နည်းများ share ကြဘူး။ Hebbar ရဲ့မီးဖိုချောင် app ကို - ပို. အရေးကြီးသည်, နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို-of ပါးစပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးဖိုချောင်အကြောင်းကိုမျှဝေဖြန့်ဝေဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://hebbarskitchen.com/
9.78 ကို MB
မီးဖိုချောင်ပုံပြင်များ - ...